နာတာလီ Gulbis: အားလုံး LPGA ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားအကြောင်း
LPGA ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားနာတာလီ Gulbis အင်ဖို
ဤသည်ဂေါက်သီးအပေါ်နာတာလီ Gulbis အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုနဲ့ဓာတ်ပုံပြခန်းများအပါအဝင်လူကြိုက်များ LPGA ဂေါက်သီးလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး features တွေ။ သင်တစ်ဦး Gulbis ၏ပန်ကာ, သို့မဟုတ်သူမ၏အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေလျက်နေပါလျှင်အောက်ပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်စစ်ဆေးပါ။
နာတာလီ Gulbis စွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots
သူမဒီဓာတ်ပုံကိုပြခန်းကိုပြန် 2004 ခုနှစ်တစ် swimsuit ပြက္ခဒိန်ဖြန့်ချိသည့်အခါနာတာလီ Gulbis ပထမဦးဆုံးကျယ်ပြန့်အသိပေးရရှိခဲ့သူမ၏ဓါတ်ပုံများအားလုံးအများပိုင်ပွဲတက်သည်ဝတ်ဆင်ပေါင်းတခြား "တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း" pose အတူ Gulbis '' ပြက္ခဒိန်ရိုက်ချက်များအချို့ပါဝင်သည်။ နောက်ထပ် "
About.com မှလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ© Bret ဒေါက်ဂလပ်, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပွားမည်မဟုတ်ပါ
Gulbis '' အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းအသေးစိတ်ရှာဖွေနေပါသလား ဤသည်အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုသူမ၏ဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တို့ပါဝင်သည်။ နောက်ထပ် "
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော "တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းရိုက်ချက်များ" ပြခန်းများအပြင်ကျနော်တို့ကိုလည်းဂေါက်ကွင်းအပေါ်နာတာလီ Gulbis ၏ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းရှိသည်။ ဒီစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျသူတို့အားပြခန်းရည်ညွှန်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Gulbis '' လွှဲနှင့်အခြား On-သင်တန်းပုံရိပ်တွေ၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကလစ်နှိပ်ပါ။ နောက်ထပ် "
USGA အားဖြင့် '' ပိတ်ပင်ခံရ '' မူရင်း Gulbis Swimsuit ပြက္ခဒိန်
ဟုတ်ကဲ့, ကစစ်မှန်တဲ့ရဲ့မူရင်းနာတာလီ Gulbis swimsuit ပြက္ခဒိန်စကားပြောတစ်ဦးထုံးစံ၌, USGA အားဖြင့်ပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။
ပြက္ခဒိန် 2004 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် 2005 ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်ကဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ ဒါဟာ swimsuits အတွက်သူမ၏၏မျိုးစုံဓာတ်ပုံများအပါအဝင် Gulbis ၏ "တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းရိုက်ချက်များ" featured ။ Gulbis အဆိုအရ USGA 2004 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ကာလအတွင်းရောင်းကုန်ပစ္စည်းများရွက်ဖျင်တဲထဲမှာကိုဆက်ကပ်ရန်အစီအစဉ်များနှင့်အတူပြက္ခဒိန်၏ "ခြောက်လသို့မဟုတ်ခုနစ်ခု" အမှုများကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, Gulbis '' 2003-for-2004 ပြက္ခဒိန် - သာ On-သင်တန်းဂေါက်သီးရိုက်ချက်များ featured ရာ - လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်ခဲ့သည်။
USGA အရာရှိများကထိုကိစ္စများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြက္ခဒိန်ဂေါက်သီးအချို့ sexy ရိုက်ချက်များပါဝင်သည်ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်ဒါပေမယ့်သူတို့ကအမြိုးသမီးမြားရဲ့အပွင့်လင်းကာလအတွင်းရောင်းချရန်ကနေဆုတ်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကရောင်းဆန့်ကျင် USGA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်, သို့သော်, အရောင်းမှတ်တမ်းများ setting ကနေပြက္ခဒိန်တားဆီးခဲ့ပါဘူး။ ပြက္ခဒိန် - ကတယ်အာရုံ - ထို LPGA ခရီးစဉ်အပေါ်အဓိကကြယ်ပွင့်သို့ Gulbis လှည့်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ပြက္ခဒိန်ကနေ swimsuit pics အချို့ကိုတွေ့မြင်လိုပါသလား? ၏သင်တန်းသင်ပြု! အဆိုပါကိုသွားပါ နာတာလီ Gulbis စွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots ကြောင့်မူရင်းပြက္ခဒိန်ထဲကနေအများအပြားပုံရိပ်တွေပါဝင်သောဓာတ်ပုံကိုပြခန်း။
နာတာလီ Gulbis များအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦးကဦးဝင်း
ဓာတ်ပုံ©ပက်ထရစ် Micheletti; ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့
ဂေါက်သီးမှနာတာလီ Gulbis '' ကတိကဝတ်ကိုအနည်းဆုံးမဟုတ်အမှန်တကယ်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သူမည်သူမဆိုအသုံးပြုပုံမေးခွန်းထုတ်လို့မရပါ။ သူမသည်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဂေါက်သီး, တိုးတက်စေရန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပြင်းထန်သောငျြ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမလည်းတကယ်တစ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, တိုက်ခိုက်နေခဲ့သည်။
ဒါကပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲနောက်ဆုံးတွင် Evian မာစတာမှာဇူလိုင်လ 29, 2007 ရက်တွင်ရောက်လာတယ်။ Gulbis အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်အမြင့်ဆုံးဒေါ်လာပြိုင်ပွဲများ၏တဦးတည်းပြောဆိုထားသည်။ သူမသည်ပထမဦးဆုံးအပိုအပေါက် birdying, Jeong ဂျန်ကျော်တစ်ဦး PLAYOFF အနိုင်ရဖြင့်ပြုလေ၏။
Gulbis ဒီပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲသူမ၏ဖို့ကိုဆိုလိုတယ်ဘာ Post-ပြိုင်ပွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများတွင်ဟုမေးခဲ့သည်။ "ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?" သူမပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ "သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးရှိသနည်း"
Gulbis ဤအချက်မှာသာ 22 နှစ်အရွယ်မှာနှင့်ဒီအောင်ပွဲလာပိုပြီးအများအပြားရဲ့ပထမဦးဆုံးပါလိမ့်မယ်ထင်ရှား။ , ထိုသို့လမ်းထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့မထားပါဘူး။ နောက်ကျောပြဿနာတွေတက်လှီးဖြတ်ခြင်း, Gulbis ရံဖန်ရံခါတွေ့သို့ရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးအစိုင်အခဲလိုလားသူဖြစ်နေဆဲနေချိန်မှာသူမကသေးအနိုင်ရရှိအမှတ်2add နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။
က Tiger Woods ဥပဒေ '' ကျား '' အားမိမိရီးရဲလ်ပထမအမည်ပြောင်းလဲပါသလား?
ဂယ်ရီ Player ကို
မာရီယာ Verchenova ဓါတ်ပုံများ
နစ်ခ် Faldo ကိုယ်ရေးဖိုင်
အိမ်စီမံကိန်းများကို၏ထိပ်တန်း9စာအုပ်များ - အိပ်မက်မှ Catalogs
ဘယ်အချိန်မှာအမေရိကန်ဗီယက်နမ်ဖို့ပထမဦးစွာတပ်ဖွဲ့များ Send ခဲ့သလား
1979 မှ 1970: အာဖရိက-အမေရိကန်သမိုင်း Timeline ကို
လွှဲပြောင်း Epithet အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
Universal Indicator အဓိပ္ပာယ်
နပိုလီယံစစ်ပွဲများ: မာရှယ်မိုက်ကယ် Ney
ဂရိတ် Mandolin ကစားသမား
Geronimo နှင့်ဝိန်း Fort Pickens
အလယ်ခေတ်လူတွေကတစ်ဦး Flat ကမ္ဘာမြေကိုယုံကြည်ခဲ့သလား
Archduke ဖရန့်ဖာဒီနန်, 1914 ခုနှစျ၏လုပ်ကြံခံရ
Macuahuitl: Aztec စစ်သည်များ၏သစ်သားဓား
Vouloir Pouvoir Devoir - ပြင်သစ်ကြိယာ
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့်ကျိန် ဆို. ပူဇော်